Honda,Toyota အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Ko Tun Tun
1-Honda Fit Shuttle... 2012.
MDY..1P...စမက် full Grade...Black(223သိန်း)
စမက်ကီး. မှန် အပူပေး. Fog light
2-Honda Fit Shuttle...2012
ကြိုက်တယ် နယ်ပြော အမည်ပေါက် ရမည်...
7P...စတိ နောက်ဆုံးနံပါတ်ရမည်.... အပြာ...(208သိန်း)
3-Honda Fit Shuttle...2012
7P...စတိ နောက်ဆုံးနံပါတ်ရမည်... silver... (215သိန်း)
4-Honda Fit GP1...2011
BGO...6P...G Hybride... အဖြူရောင် (187 သိန်း)
5-Honda Fit Shuttle...2012
MDY...6N...C grade...ပုလဲအဖြူ(215 သိန်း)
Alloy.volume နှစ်ဘက်.ထိုင်ခုံ စွပ်
ဒိုင်ခွက် နှစ်ခွက်. နောက်လက်တင်
7-Honda Fit Shuttle...2012
Steering volume (L+R).ထိုင်ခုံ half လည်သာ
8-Honda Fit Shuttle...2012
7P...စတိ နောက်ဆုံးနံပါတ်ရမည်.... အဖြူ .(225သိန်း)
Honda Or Alloy.volume နှစ်ဘက်
Push start.Aircon Digital. ခေါင်းမှီ သုံးလုံး
11--Honda Fit Shuttle...2012
YGN...အမည်ပေါက် ရမည်...7P..စတိ နောက်ဆုံးနံပါတ်ရမည်
Navi premium Grade...Silver.(133သိန်း+စလစ်+အခွန်)
ကားများအားလုံး 1300cc.2wd.Auto.Abs.Airbags.All power.Aircon Digital.Cruise Control.VSA.Eco mode
မှန်မည်း.ဘက်မှန်မီးချောက်. Tv.DVD.Back camera အစုံပါ
မှတ်ချက်... ရန်ကုန် ကျောက်တံတား မြို့နယ် တွင်း ကားကြည့်ရမည်